Akom-baovao DIRMRS Mahajanga sy DIRMRS Alaotra Mangoro – Ministère des Mines et des Ressources Stratégiques
Akom-baovao DIRMRS Mahajanga sy DIRMRS Alaotra Mangoro
21/03/2022 21/03/2022 SMLN
Samy manatanteraka ny anjara tandrifiny amin’ny fambolen-kazo hatrany ireo ekipan’ny Fitaleavam-paritry ny Harena an-kibon’ny tany sy ny Loharanonkarena Stratejika sy ny BCMM eny ifotony.
Notanterahana ny zoma 11 Febroary 2022 tao amin’ny Station Forestière Marohogo, Distrika Mahajanga II ny fambolen-kazon’ny fianakaviamben’ny mpisehatra eo amin’ny harena an-kibon’ny tany ao amin’ny fari-piadidian’ny Fitaleavam-paritra Mahajanga.
Niara-nifarimbona tamin’izany hetsika izany iraisam-paritra DIRMRS Mahajanga, Police des Mines ary BCMM, notronin’ny mpiara-miasa avy ao amin’ny BAM sy Police des Mines Maevatanana eo an-daniny, ary ireo mpandraharaha mpitrandraka, mpanodina, mpanondrana ary mpanefy firavaka amin’ny ankilany.
Zana-kazo miisa 1600 izay nahitana hazomboay sy madiro no novolena.
Ho an’ny DRMRS Alaotra Mangoro, nandray anjara mavitrika tamin’ny fanokafana tamin’ny fomba ofisialy ny taom-pambolen-kazo 2022 ho an’ny Faritra Alaotra Mangoro ireo mpiara-miasa. Hetsika izay natao tao amin’ny Kaominina Ambanivohitra Andilanatoby, Distrika Ambatondrazaka. Ary nahitana ny fandraisana anjaran’ireo sampandraharaha miankina sy tsy miankina amin’ny Fanjakana, fikambanana isan-karazany, mpianatra, mpitandro ny filaminana, fikambanana ara-pivavahana, Tangalamena. Tonga nanome voninahitra izany ireo tomponandraiki-panjakana ambony sy olom-boafidy any an-toerana.
Zanakazo Acacia sy Eucalyptus miisa 20000 no novolena nandritra izany tao anatin’ny velarantany 10ha. Notanterahana teo ambany fitarihan’ny Fitaleavam-paritry ny Tontolo Iainana sy ny Fandrosoana Lovainjafy(DREDD) Alaotra Mangoro ny hetsika.
« Fambolen-kazo fanarenana loharano, antoky ny fIveloman’ny mponina »
« Izay mamboly hazo manavotra firenena, izay mandoro ala mandoro tanindrazana »
Fampitam-baovao sy sary : DIRMRS MAHAJANGA sy DRMRS ALAOTRA MANGORO
← Akom-baovao DRMRS Melaky: Hetsika fambolen-kazo tao Andabotoka Maintirano
Voin-kava-mahatratra: tolo-tànana ho an’ny kaominina Iaritsena Ambalavao →